Puntlnad oo fasaxday dhammaan shaqaalaha dawlada maalinta birriya, sababna uga dhigtay xuska dhalashada (NMNNKH) – Radio Daljir
Puntlnad oo fasaxday dhammaan shaqaalaha dawlada maalinta birriya, sababna uga dhigtay xuska dhalashada (NMNNKH)
Garowe, Feb, 04 ? Dawladda Puntland ayaa maantay si rasmi ah ugu dhawaaqday in maalinta birriya ay fasax-yihiin dhammaan shaqaalaha ku dhaqan deegaannada Puntland, waxaana ay fasaxaasi sabab uga dhigtay xuska dhalashada (NMNNKH).
W/kuxiggeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland Siciid Daahir Maxamuud ?Qodax? oo maantay waraysi siiyay Radio Daljir ayaa si qeexan uga waramay fasaxaasi, waxaana uu tilmaamay inay ummada islaamka ah ugu hambalyaynayaan munaasadaasi qiimaha u leh dadka islaamka ah.
Dhinaca kale, mudane Qodax ayaa ka warbixiyay heerka ay xilligaan marayaan ciyaaraha gobollada Puntland oo si toos ah uga socda garoonka Mira-awaare, waxaana uu meesha ka saaray wax-caqabad ah inaysan la kulmin tan iyo markii ay bilaabeen ciyaaraha 1-dii bishaan February 2012.